Solutions for Arrimaha Common on galinta Video galay PowerPoint
> Resource > Video > Sida aad u gashanayso A Video lagu PowerPoint (AVI, MP4, MOV, wmv iyo iwm)
Ma ahan la yaab leh ama wax cusub in user hidde u gelin videos, music ama clip farshaxanka in la dhamaystiro content ee slide PowerPoint ay. Halkii qoraalka oo dhan, waxa uu noqon doonaa in ka badan mashquuliya, dhiirrigeliyo, ama lagu qanci haddii ay jiraan muuqaal ah ama maqal ah oo loogu taageero dheeraad ah. Ma waxaad sida caadiga ah la mid ah sameeyo idinkaa iska leh, waayo?
Ma uun isku dayeen in ay geliso video ah oo wuxuu galay PowerPoint in la dhamaystiro waxyaabaha aad? Tallaabooyinka waa mid aad u fudud, si toos ah iyo si sahlan xitaa fahmimaay hore. All inaad samayso waa guji Insert> Movie (magaca badhannada kala duwan yihiin laga yaabo in yar ku xiran tahay version of PowerPoint aad isticmaalayso) ka dibna dhirtuba faylka video ka buugga hoose. Markaas Waxaad sameyn kartaa video clip ah in loo maqli karo si toos ah ama marka la riixi. Doorashadan ayaa sidoo kale la bedeli karaa ka dib on.
Haddii video waxay ku fashilantay inay Radidiyaha, waxaa macquul ah sare in ay sabab u tahay arimo caadi dhowr ah sida khilaafka version PowerPoint ama ma taageeri qaab faylka, videos aad u tiro badan la geliyo on top of kasta oo kale, video files dhaqaaqay jidka ka duwan ama folder iyo wax ka badan. Halkan ka akhriso u sababo dheeraad ah oo ku aadan sababta aad warqadda of video ah oo wuxuu galay PowerPoint uma shaqeeyo . The xal lagu talinayaa waa sidan:
Xalka 1: khilaafsan version PowerPoint
Xalka 2: update links ee file video ah
Xalka 3: Beddelaan qaabab file video aqlka ama codec
Fadlan ka eeg deg deg ah ama double-jeeg haddii qaab file video aad waxaa taageera ama la jaan qaada version aad hadda ee Microsoft Office. Kordhin The file .mov tusaale ahaan, si dabiici ah ka ciyaari kartaa Xafiiska Mac sababtoo ah waa mid ka mid ah qaabka file hooyo. Haddii aad isticmaasho marar aad u badan, haddii kale waxa ay noqon doontaa wax yar ka SLT si ay kor aad Microsoft Office kaliya ujeedadaas. Waxaa dhab ahaantii kale ah meesha aad u bedeli karaan file video la midkood Converter jira ama isku day in aad si fudud u soo Converter Video Ultimate . Fiiri talooyin badan oo ku saabsan sida loo doorto video ah Converter xaq !
Liiska Qaabka Video socon File
(Format iyo file)
Notes on TBA : qaabab file waxaa hadda aan la aqoonsan yahay ama ay taageerayaan PowerPoint.
Haddii aad guurtay file video galay folder cusub, qorsheyneyso inay dirto email ay ku qoran PowerPoint ama nuqul gal CD ah, fadlan hubi in ay xiriir la mid ah files video ayaa la casriyeeyay. Tan ugu muhiimsan, had iyo jeer badbaadiyo ama file video ka guurto gal la mid aad PowerPoint. Taasi dhab ahaantii, waa meesha ugu sareysa ee liiska ku jira ee Arrimaha caadiga ah ee ku guuldareystay video playbacks.
In PowerPoint, waxaad si fudud u isticmaali kartaa Xirmada naadiya> for CD si loo hubiyo in dhammaan la xiriira warbaahinta ama video files in aad geliyo PowerPoint waxaa si fiican u badbaadiyey in folder isku mid ah.
Fadlan raac xiriirada hoose tallaabo-tallaabo edbin u faahfaahsan oo ku saabsan sidii ay u cusboonaysiiyaan xiriir ku salaysan version Xafiiska ee.
Xirmada u CD 2007
Xirmada u CD 2010
Xirmada u CD 2013
The Video Converter Ultimate noqon doonaa Converter file fiican haddii aad u baahan tahay in aad loogu badalo file video sidaas in ay socon u geli PowerPoint ah. Ma ahan oo kaliya aalladda-soomi xawaaraha diinta, laakiin waxaa sidoo kale la AAN tayada khasaaro! Halkii diinta faylasha aad mid mid, waxaad si fudud u jiidi-iyo-tagi karaan iyaga gal Converter ee diinta Dufcaddii ah.
Waa maxay u xiiso badan waa in aad si dhab ah u isticmaali kartaa isku waslad of software inaad kala soo baxdo wax video online ama file maqal ah. Waxa kale oo jira editor ka dhisay-in aad u isticmaali karto in la shakhsiyeeyo faylasha aad ka hor inta aanad is gelin video ka galay PowerPoint ah. Waxaa Download hadda iyo sahamin inteeda kale oo ka mid ah muuqaalada ku maqan video kama dambaysta ah ee Converter!